Kooxo Hubaysan oo Xalay Weeraro Ku Qaaday Guddomiyihii Guddiga Ammaanka Xerada Xagar Dheer
Wararka naga soo gaaraya Xeryaha Qaxootiga Soomaalida ee Waqooyiga Bari ee dalka Kiinya ayaa sheegaya
Date: 2011-12-30 12:34:51
Wararka naga soo gaaraya Xeryaha Qaxootiga Soomaalida ee Waqooyiga Bari ee dalka Kiinya ayaa sheegaya in Xalay halkaa lagu weeraray Guddoomiyihii Gudiga ammaanka ee Xeradaas Amed Maxamed San dheere.
Weerarkan ayaa la sheegay in halkaa ay ka gaysteen Rag Wajiyada soo duubtay kuwaasoo ku hubaysnaa Qoryaha A.k.47 kuwaasoo dhowr xabbadood ku dhuftay Guddoomiyaha.
Guddoomiyaha ayaa weerarkaasi qaarka danbe dhaawac ka gaaray kaasoo iminka lagu dabiibayo Isbitaal ku yaala Degaanka Xagar Dheer ee xeryaha qaxootiga ee dha dhaab.
Sarkaalkan ayaa markii la weerarayay ku sugnaa mel aan sidaa uga fogeyn hoyga ku deggan yahay Xeradaas.
Weerarka kaddib ayaa waxaa halkaa soo gaaray Ciidamada ammaanka ee Kiinya kuwaasoo markiiba meesha ka bilaabay Hawl galo baaritaana ah oo ay ku baarayaan Dadkii ka danbeeyay weerarka lagu qaaday Axmed San dheere.
Axmed Maxamed San dheere ayaa waxa uu guddoomiye u yahay Guddiga ammaanka kuwaasoo la sheegay in ay si toos ah ula shaqeeyaan Ciidamada Kiinya kuwaasoo qaabilsan sida la sheegay ka hor tagga falalka qaraxyada iyo dilalka ka dhaca Xeryaha Qaxootiga Dha Dhaab ee waqooyiga Bari ee Kiinya.
Isku deygan dilka Guddoomiyaha ayaa waxaa uu imaanayaa xilli maalmihii u danbeeeyayba ay isasa soo tarayaan Falalka qaraxyada ee ka dhaca Xeryaha qaxootiga ee ku yaala waqooyiga Bari ee Dalka Kiinya gaar ahaana degaanada ay soomaalidu degto.
Arrintan ayaa waxaa ay imaanaysaa saacado uun ka diib markii wasiirka arrimaha Gudaha Kiinya Chorge Seytooti uu ka digay weeraro ka dhaca gudaha Kiinya kaasoo la filan karo waa siduu hadalka u dhigaye inuu uga yimaado Xarakada Shhabaab inta lagu guda jiro Ciidda Kirismiska.
Si kastaba ma jidho cid sheegatay weerarkii xalay ka dhacay Xerada Xagar dheer oo ka mid ah Xeryaha qaxootiga Soomaalida ee Dha Dhaab iyadoo dhinaca kalena ay Cabsi xooggan la soo dersitay Soomaalida ku dhaqan xeryahaas oo muddooyinkii danbaba ka anfariirsanaa qaraxyada isa soo taraya ee halkaa ka dhacaya.